FAQs - Yangzhou ZhiTong मेसिनरी co., Ltd.
स्वतन्त्र आयात र निर्यात अधिकार भएको कारखाना।
दैनिक रासायनिक र कस्मेटिक मेसिन 20yrs भन्दा बढी मा विशेष। भ्याकुम होमोजेनाइजर मिक्सर, शैम्पू र तरल साबुन मिक्सर, स्टेनलेस स्टील ट्यांक भण्डारण ट्यांक, कीटाणुनाशक उत्पादन लाइन फिलिंग र अन्य प्याकिङ मेसिनहरू।
तपाईंको कारखाना स्थान कहाँ छ? म त्यहाँ कसरी भ्रमण गर्न सक्छु?
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र Baiyun, Guangzhou मा स्थित छ, Baiyun एयरपोर्ट देखि 20 मिनेट टाढा कार द्वारा,
Jiansu प्रान्त मा स्थित कारखाना .Shanghai Pudong एयरपोर्ट बन्द।
तपाईंको कारखानाले गुणस्तर नियन्त्रणको सन्दर्भमा कसरी गर्छ?
गुणस्तर र ग्राहक पहिलो हो। हामी ढुवानी अघि मेसिन निरीक्षण गर्न समर्थन गर्छौं हाम्रो कारखानाले CE र 12 भन्दा बढी राष्ट्रिय प्याटेन्टहरू र BV र SGS अडिट कारखाना2वर्षमा एक पटक प्राप्त गरेको छ।
यदि हामीले तपाईबाट खरिद गर्छौं भने ग्यारेन्टी के छ?
हामीबाट अर्डर गरिएका सबै उपकरणहरूले डेलिभरी मितिदेखि एक वर्षको ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ।
हामी कुन भुक्तानी सर्तहरू स्वीकार गर्न सक्छौं?
1. सामान्यतया हामी T/T शब्द वा L/C मा काम गर्न सक्छौं।
2. T/T अवधिमा, 40% तल भुक्तानी अग्रिम आवश्यक छ। र 60% ब्यालेन्स ढुवानी अघि व्यवस्थित गरिनेछ।
3. L/C अवधिमा, नरम खण्डहरू बिना 100% अपरिवर्तनीय L/C स्वीकार गर्न सकिन्छ। कृपया तपाईले काम गर्ने व्यक्तिगत बिक्री प्रबन्धकसँग सल्लाह खोज्नुहोस्।
सामान्यतया, हामीले निक्षेप प्राप्त गरेपछि नेतृत्व समय 30 दिन हो। ठूलो अर्डरको लागि। यसलाई वार्ता गर्न आवश्यक छ।
हामीले ढुवानीका लागि के रसद तरिकाहरू काम गर्न सक्छौं?
हाम्रो मेशिनहरू विभिन्न यातायात मार्गहरू जस्तै एयर फ्रेट ढुवानी रेलेज मार्फत पठाउनुहोस्।
प्रस्ताव एक वर्ष वारेन्टी लामो सेवा वारेन्टी भित्र वा पछि नि: शुल्क प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्दछ। वारेन्टी अवधि भित्र, हामी नि: शुल्क मर्मत सेवाहरू प्रदान गर्दछौं। वारेन्टी अवधि पछि, हामी केवल आवश्यक सामग्रीको लागत चार्ज गर्छौं।
तपाइँ ग्राहकलाई कस्तो प्रकारको मेसिनहरू आपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी विभिन्न प्रकारका मेशिनहरू र सम्पूर्ण उत्पादन लाइन प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
(१) क्रीम, पेस्ट उत्पादनहरू,
कस्मेटिक उद्योगमा: अनुहार क्रीम, शरीर क्रीम, धुने क्रीम, फूलदानी रेखा आदि।
खाद्य उद्योग उद्योगमा: सस, केचप, टमाटरको पेस्ट, मेयोनेज, तोरी, चकलेट आदि।
रासायनिक उद्योगमा: वेल्डिंग पेस्ट, मसी, रंग, रंग आदि।
तिनीहरूका लागि उत्पादन लाइन: RO वाटर ट्रीटमेन्ट-भ्याकुम इमल्सिफिङ मेसिन, भण्डारण ट्याङ्की, फिलिंग मेसिन, क्यापिङ मेसिन, लेबलिङ मेसिन, कन्वेयर बेल्ट-इङ्क जेट प्रिन्टर सीलिङ मेसिन, स्क्रिनिङ मेसिन आदि।
(२) तरल पदार्थ
स्याम्पु, लोशन, तरल साबुन, डिटर्जेंट, रस, समाधान आदि।
तिनीहरूका लागि उत्पादन लाइन: RO पानी उपचार - तरल धुने मिक्सर- भण्डारण ट्याङ्की- भर्ने मेसिन-क्यापिङ मेसिन- लेबलिङ मेसिन- कन्भेयर बेल्ट- मसी जेट प्रिन्टर सील गर्ने मेसिन, संकुचन मेसिन आदि।
(३) मेकअप उत्पादनहरू:
लिपस्टिक, लिप ग्लोस, नेल पॉलिश, मस्कारा आदि
तिनीहरूका लागि मेसिनहरू: होमोजेनाइजर मिक्सर, कोलियोड मिल, लिपस्टिक भर्ने मेसिन, फ्रिजिङ मेसिन आदि।
सेवा पछि कस्तो छ?
त्यहाँ कुनै समस्या छैन हामीले हाम्रो इन्जिनियरलाई समयमै स्थानीय रूपमा मेसिन स्थापना गर्न वा ठीक गर्न पठाउन सक्छौं तर ग्राहकले राउन्ड एयर टिकटको लागत तिर्नु पर्छ र हाम्रो इन्जिनियरको लागि होटल आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
के तपाइँ डेलिभरी अघि तपाइँका सबै सामानहरू परीक्षण गर्नुहुन्छ?
हो, हामीसँग डेलिभरी अघि 100% परीक्षण छ।
तपाईले हाम्रो व्यापारलाई दीर्घकालीन र राम्रो सम्बन्ध कसरी बनाउनु हुन्छ।
(१) हामी हाम्रा ग्राहकहरूको फाइदा सुनिश्चित गर्न राम्रो गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी मूल्य राख्छौं।
(२) हामी प्रत्येक ग्राहकलाई हाम्रो साथीको रूपमा सम्मान गर्छौं र हामी इमानदारीपूर्वक व्यापार गर्न र उनीहरूसँग साथी बनाउँछौं, चाहे तपाईं जहाँबाट आउनुभएको होस्।
के तपाइँ यसमा विशिष्ट साइजको आफ्नै लोगो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ?
Yes.we विशिष्टताहरू अनुकूलित र निजीकृत अनुकूलन।
वारेन्टी र सेवा पछि?
सामान्य प्रयोगमा गुणस्तर समस्याको लागि एक वर्ष वारेन्टी र नि: शुल्क मरम्मत।
गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गर्ने?
प्रत्येक मेसिनले ढुवानी गर्नु अघि परीक्षण गर्नेछ, एक पटक त्यहाँ समस्या छ, राम्रोसँग रोक्नुहोस्
डिलिवरी र फ्याक्ट्री निरीक्षण गर्न व्यक्ति पठाउन पनि समर्थन गर्दछ।
के तपाईका इन्जिनियरहरूले विदेशमा सेवा गर्न सक्षम छन्?
हो, हामीसँग विदेशमा मेसिन स्थापना गर्ने धेरै अनुभव छ।
पूर्ण स्टेनलेस स्टील 304 र 316L संग अपनाउनुहोस्।